Madaxweynaha Puntland oo Muqdisho kula kulmay Danjiraha dalka Jarmarka ee Soomaaliya-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweynaha Puntland oo Muqdisho kula kulmay Danjiraha dalka Jarmarka ee Soomaaliya-Sawiro
Madaxweynaha Puntland oo Muqdisho kula kulmay Danjiraha dalka Jarmarka ee Soomaaliya-Sawiro
December 5, 2017 - By: Abdirahman Abdi
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya safiirka dalka Jarmalka ee Soomaaliya Miss. Jutta Frasch.
Dr.CabdiwelI Maxamad Cali Gaas ayaa waxaa kulanka ku wehelinayey mas’uuliyiin ka tirsan goleyaasha Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland, waxaana kulanka looga wada hadlay xiriirka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland iyo dalka Jarmalka, mashaariicaha horumarineed ee dalka Jarmalku ka furliyo Puntland, fursado shaqo abuur oo loo sameeyo dhallinyarada Puntland, tayaynta iyo qalabaynta cisbitaalada waaweyn ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa ugu horeyn xaqiijiyey in Puntland ay diyaar u tahay xoojinta xiriidhka Jarmalka iyo Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, waxaana uu xusay Madaxweynuhu in Puntland iyo dalka Jarmalku leeyihiin wadashaqayn balaaran oo ku saleysan wax-qabad, siyaasad iyo saaxiibtinimo.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Ambassador Jutta Frasch ayaa ka wada hadlay sidii dhalin yarada Puntland loogu sameyn lahaa shaqo abuur, gaar ahaan sidii loogu hirgelinlahaa dhalinta Puntland dugsiyada farsamada gacanta si ay u noqdaan dad aqoon leh kuna maareeya danahooda gaar ka ah iyo kan dalkooda iyo dadkoodaba.
Gudiga Difaaca Puntland oo ka hadlay xaalada Tukaraq iyo wadahadala Somaliland iyo Puntland.
August 19, 2018 By Mohamud Nadif
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo is casilay
Raisal Wasaaraha Soomaaliya oo daahfuray dayactir lagu sameeyay Xarunta CID
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta Billaabay la xisaabtanka sannadlaha ah ee Wasiirrada
August 18, 2018 By Mjama
Mexico oo afti u qaadaysa dhismaha garoon diyaaradeed